सुशीला प्रधानांग आइतवार, भदौ ११, २०७४ 1791 पटक पढिएको
एक्कासि नियमले कोठाबाट बाहिर निस्कँदै आप्mनी आमालाई भन्यो, ‘मम्मी ! हेर्नुस् त मैले पनि दाइले जस्तै मेरो पाइन्टलाई पनि बुट्टेदार डिजाइन बनाएँ नि ।’ अनि ऊ आफै हाँस्न थाल्यो– हा...हा...हा... ।
नियमकी आमा उषा छतमा बसेर पुस्तक पढ्दै थिइन् । उनले पुस्तकबाट आँखा नहटाइकन नै भनिन्, ‘कस्तो डिजाइन हो छोरा ? ’ नियमले कुनै सादा कागजमा चित्र कोरेर डिजाइन बनाएको होला भन्ने सोचेर उनले पुस्तकबाट आँखा नहटाई भनिन्, ‘बाबु ! म अहिले पुस्तक पढ्दैछु । मलाई एकछिन दुःख दिन नआऊ ल ! तिमीले अरू पनि डिजाइन बनाइराख ।’
आप्mनो आमाको स्वीकृति पाएर नियमले दंग पर्दै भन्यो, ‘हस् मम्मी ! म तल कोठामा छु है ।’ उषाले पनि जवाफमा ‘हस्, छोरा !’ भन्दै आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाइन् ।
जाडोको महिना घाम नडुब्दासम्म सबैलाई घाम प्यारो नै लाग्छ । पारिलो घाममा बसेर पुस्तक पढ्दै गर्दा उषालाई रमाइलो लागिरहेको थियो । त्यसैले उनी झन्झन् पुस्तक पढ्नमा तल्लिन हुँदै गइन् । उनलाई घाम पातलिँदै गएको होसै भएन । निक्कै बेरपछि नियम फेरि छतमा आयो र भन्यो, ‘मम्मी ! कति पढिरहनु भएको भन्या ? तपाईं त हामीजस्तै स्कुलमा पढ्न जानु हुन्न नि ? मलाई भने भोक लागिसक्यो ।’
छोराको आवाजले उनी पुस्तकको संसारबाट बाहिर निस्किइन् । उनले आफ्नो नाडीको घडी हेरिन् । उनको नाडीमा बाँधिएको सानो घडीमा तीन बजिसकेको रहेछ ।
त्यो देखेर उनले भनिन्, ‘अहो ! तिमीले मलाई बोलाएर राम्रो गर्‍यौ छोरा !’ यति भन्दै उनी कुर्सीबाट उठिन् । छोराले पनि पढिराखेको छ होला भन्ने उनले सोचेकी थिइन् । पढ्दापढ्दै छोरा थाकिसक्यो होला भनेर उनले नियमलाई अँगाल्दै भनिन्, ‘मेरो छोरा ! ज्ञानी छोरा !’
नियमले पनि उषाको गाला मुसार्दै भन्यो, ‘मेरो मम्मी ! ज्ञानी मम्मी !’ उषाले पनि ठट्यौली पाराले भनिन्, ‘धत् ! मम्मीलाई पनि ज्ञानी भन्छौ ? ’
त्यो सुनेर नियम मुख छोपेर हाँस्यो । उषा भान्सामा गइन् र खाजा बनाउन थालिन् । नियम कोठामा बसेर टीभीमा कार्टुन हेर्न थाल्यो ।
उषाले खाजा तयार पारिन् र खानका लागि छोरालाई बोलाइन् । नियमले पनि आएँ भन्दै भर्‍याङबाट एकैचोटी बुरुक्क उफ्रेर फाल हाल्यो । ऊ भुइँमा थचारियो । त्यसो गर्दा गडाम्मको आवाज निस्क्यो । त्यो आवाज भान्छासम्म पुग्यो ।
आवाज सुनेर उषाले भान्सैबाट सोधिन, ‘के भयो छोरा ? लड्यौ कि के हो ? ’ उसले उठ्दै भन्यो, ‘हैन मम्मी ! जम्पिङ गरेको ।’
आमा, छोरासँगै बसेर खाजा खान थाले । खाँदाखाँदै उषाले केही सम्झेजस्तो गर्दै भनिन्, ‘हत्तेरिका ! म पनि कस्तो हुस्सु होला । ग्यासमा चिया बसालेको भुसुक्कै बिर्सेछु ।’ नियमले उनलाई गिज्याउँदै भन्यो, ‘मम्मी ! तपार्इं त बूढी हुनुभयो हगि ? ’
उषाले हाँसेर जवाफ दिइन्, ‘छोरा ! मम्मीलाई त्यस्तो भन्नुहुन्न । ज्ञानी छोराले त्यस्तो भन्दैन पो त।’
नियमले फटाकले जवाफ दियो, ‘ अँ.. अनि अस्ति दाइले तपाईंसँग पैसा माग्दा तपाईंले किन चाहियो पैसा भनेर सोध्दा दाइले रिसाएर सुद्दी भनेर बाहिर निस्कनु भएको होइन ? त्यतिबेला त तपाईंले दाइलाई केही भन्नु भएन ।’
नियमको कुरा सुनेर उषा खङरङ भइन् । उनको टाउको भन्नन घुमायो । उनी एकछिन थचक्क कुर्सीमा बसिन् । उनको निधारमा चिटचिट पसिना निस्किन थाल्यो ।
समय र नियम उषाका दुई छोरा हुन् । समय दस कक्षामा पढ्छ भने नियम पाँच कक्षामा पढ्छन् ।
समय ठूलो छोरा भएर होला अलि घमण्डी स्वभावको छ । उसले आफ्नी मम्मीसँग स्कुल जाने बेलामा मात्र होइन अघिपछि पनि पैसा मागिरहने गर्छ ।
उषाले पनि सकेसम्म उसको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने कोसिस गर्ने गर्थिन् । अहिले भने उनलाई नियमको कुराले डर लाग्न थालेको थियो । अब उनले समयलाई सही र गलत कुरा के हो भनेर सम्झाउनुपर्छ भन्ने बारेमा मनमनै सोच्न थालिन् ।
आइतबारको दिन दुवै दाजुभाइ स्कुल जान हतार गर्दै थिए । मौसम चिसो चिसो थियो । समयको कक्षा बिहानैबाट सुरु हुने भएकाले उ बिहानै घरबाट निस्कने गथ्र्यो ।
नियम भने स्कुलको गाडीबाट नै आउने जाने गथ्र्यो । समय गइसकेपछि नियम स्कुल जान तयार भएर भान्छामा गयो र भन्यो, ‘मम्मी ! आज मलाई पनि खाजाको लागि पैसा दिनुस् है ।’
उषाले भान्छामा काम गर्दै थिइन् । उनले नियमको स्वर सुनेर पछाडि फर्केर किन र ? भन्न मात्र खोजेकी थिइन् नियमको स्कुल ड्रेसको पाइन्ट देखेर उनी एकछिन वाल्ल परेर नियमलाई हेरिरहिन् । त्यो देखेर नियमले भन्यो, ‘ नयाँ डिजाइन हो । दाइको भन्दा राम्रो छ हगि ? ’
उनले केही नबोली छोराको पाइन्टलाई छोएर हेर्न थालिन् । छोराले पाइन्टलाई काटेर ४÷५ ठाउँमा प्वालैप्वाल पारेको रहेछ ।
उषाले एकछिन केही बोल्न सकिनन् । उनले नियमलाई भान्छाको कुर्सीमा बसाल्दै सोधिन्, ‘छोरा ! यो के गरेको ? ’
उसले सजिलैसँग जवाफ दियो, ‘डिजाइन निकालेको ।’ स्कुलको डे«सको पाइन्टमा डिजाइन निकाल्दा तिमीलाई डर लागेन भनेर उषाले पुन नियमलाई प्रश्न गरिन् । ‘स्कुल त राम्रोसँग जानुपर्छ । यस्तो कपडा लगाएर जाँदा तिमीलाई गेटबाट भित्र छिराउला त ? ’ उनले भनिन् ।
नियमले त्यो कुरालाई भुसुक्कै बिर्सेको रहेछ । त्यसपछि उसले आफ्नै टाउकोमा हात राख्दै भन्यो, ‘हत्तेरिका ! अब म कसरी स्कुल जाने ? ’ भूल स्वीकार्दै उसले आफ्नो दुवै कान समात्दै भन्यो, ‘सरी, मम्मी !’
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 2100
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 3445
चार लाख घुससहित शाखा अधिकृत पक्राउ 915